Camtinerary Trip Planner, maimaim-poana amin'ny fotoana voafetra | Vaovao IPhone
Talohan'ny fahatongavan'ireo finday avo lenta sy fivarotana fampiharana dia tsy maintsy nitodika tany amin'ireo mpitari-dalana lafo vidy isika rehetra izay tsy nahita na inona na inona mihitsy. Ny olana tsy hitantsika raha nifindra tamin'ny toerana iray nankany amin'ny iray hafa nanaraka ny lalana fohy indrindra sy haingana indrindra izahay ary nahafahanay nahita ilay zavatra mahaliana indrindra ao amin'ilay tanàna ihany. Saingy noho ny finday avo lenta sy ny rindranasa natao ho an'ny mpandeha indrindra dia afaka mampiasa azy ireo tahaka ny fitaovana tokana handaminana ny diantsika amin'ny fotoana rehetra, manisa amin'ny fotoana rehetra ny fotoana hampiasantsika hifindra, na an-tongotra, na bus, amin'ny fiara ...
Ao amin'ny App Store isika dia afaka mahita rindranasa marobe izay hanampy amin'ny fanatanterahana izany asa izany, saingy androany dia miresaka momba ny Camtinerary Trip Planner, fampiharana izay azontsika sintonina mandritra ny fotoana voafetra ao amin'ny App Store izy ary misy vidiny 4,99 euro mahazatra. Misaotra an'ity fampiharana ity dia afaka mandamina ny làlan-kizorantsika hatrany amin'ny antsipiriany kely indrindra, hahafantatra amin'ny fotoana rehetra ny fotoana hampiasainay hankanesana any amin'ireo tranokala, mba hanararaotana ny andro faran'izay betsaka araka izay tratra. Ary koa, raha mpampiasa Apple Watch ianao dia manambina anao satria Ity rindranasa ity koa dia mifanaraka amin'ny appl smartwatche, izay hanalavitra antsika tsy maintsy hamoaka ny iPhone amin'ny fotoana rehetra hahalalana ny toerana halehantsika.
Ity fampiharana ity dia mitaky farafaharatsiny iOS 10 ary misy amin'ny Espaniôla tanteraka. Raha kely ny efijery an'ny iPhone dia azontsika atao ny mampiasa azy amin'ny iPad tsy misy olana. Camtinerary Trip Planner mahazo ny ankamaroan'ny fampahalalana izay asehony antsika amin'ny serivisy avy amin'ny Yelp, Foursquare, Expedia, Michelin ary ny Trip Advisor, fampahalalana izay ampian'ireo sary avy ao amin'ny Flickr sy Google Street View. Izy io koa dia mifanaraka amin'ny rindranasa fifamoivoizana toy ny Waze, Google Maps, Citymapper, Apple Maps ary Yandex. Araka ny hitanao, ity rindranasa ity dia natao hahafahana manararaotra ny loharano rehetra omen'ny internet antsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Camtinerary Trip Planner, maimaim-poana mandritra ny fotoana voafetra
Ny Apple Watch Nike +, kintan'ny andiana horonan-tsary mahafinaritra